၁။ ဆရာရှငျ့ လသားကလေးတှကြေို့ထိုးတာ အစာကလြေို့ထိုးတာလား အစာအိမျထဲပွညျ့နလေို့ ဝမျးခေါငျးခြဲ့လို့ထိုးတာလား အဲ့ဒါလေး အငွငျးပှားနလေို့ သိခငျြပါတယျဆရာရှငျ့။ ၂။ ဂြှတျထိုး ကိုလညျး ကွို့ထိုးလို့ ရေးရတယျမလားဆရာ။ ၃။ မင်ျဂလာပါဒေါကျတာ ကနြျော အသကျ ၃၃ ကြား။ ကြို့ထိုးနတော ယခုပတျအတှငျး (၃) ရကျရှိပါပွီ။ လလေညျး အရမျးထပါသညျ။ ယခငျ တဈပါတျကြျောကလညျး ၃ ရကျလောကျဖွဈခဲ့ပါသညျ။ သို့သျော ဆေးခနျးသှားပွ၍ ဆေးထိုးဆစေားပွီး ပြောကျသှားပါသညျ။ ယခု ဖွဈနစေဉျ ဆေးခနျးပွ ဆေးထိုးဆေးသာကျနသေျောလညျး မပြောကျသေးပါဒေါကျတာ။ တရကျလုံးမနားတမျး ကြို့ထိုးနပေါသညျ။ ကြေးဇူးပွု၍ဆေးနညျးလေးပေးပါခငျဗြာ။ ဓာတျမှနျရိုကျကွညျ့ခွငျးမပွုလုပျရသေးပါ။ ပွုလုပျရနျရောလိုအပျပါသလားခငျဗြာ။ လေးစားစှာဖွငျ့။ ကွို့ထိုးလို့ရေးရတယျ။ ကလေးငယျလေးတိုငျး ကွို့ထိုးကွတယျ။ ရောဂါ မဟုတျပါ။ ကွို့ထိုးတာဟာ ရငျခေါငျးနဲ့ ဝမျးဗိုကျကိုခွားထားတဲ့ ဒိုငျယာဖရမျ ချေါတဲ့ ကွှကျသားပွားပွားခုံးခုံးကွီးက အလုပျပိုလုပျတာဖွဈတယျ။ သူ့တာဝနျက အသကျရှူတာ။ သူ့အထကျမှာ အဆုတျရှိတယျ။ ဒိုငျယာဖရမျအောကျမှာ ညာဘကျက အသညျးနဲ့ ဘယျဘကျကအစာအိမျရှိတယျ။ အဲဒီ ၂ ခုထဲက တခုခုမှာ တခုခုဖွဈရငျ ကွို့ထိုးတယျ။ ကလေးငယျတှမှော အစ
ကျွန်တော် ယူအက်စ်အေ၊ အင်ဒီယာနာပုလစ်မြို့မှာနေပါတယ်။ လာနေထိုင်သူတွေ အွန်လိုင်း အစည်းအဝေး လုပ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောမှာကို ကြိုတင် ရီကော့ လုပ်ထားပါတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
လွှတ်တော်မတက်ဘဲ ထောင်ထဲဝင်ရတဲ့အမတ်များနဲ့ စင်ပြိုင်အစိုးရ ဘိုဘို - ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း ၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ ဓာတ်ပုံ ပုံစာ ၁၉၆ဝ နောက်မှာ ပထမဆုံးလုပ်တဲ့ ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲ ၁၉၉ဝ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲက တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ လွှတ်တော်အမတ်တွေဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ပထမဆုံး လွှတ်တော်မတက်လိုက်ရတဲ့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီလွှတ်တော်က အများဆုံး အနိုင်ရတဲ့ NLD အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့တကွ တခြား ရွေးချယ်ခံ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အများအပြား လွှတ်တော်တာဝန်တွေ မထမ်းဆောင်ရဘဲ ထုတ်ပယ်အကျဉ်းချခံရတာတွေ ဖြစ်ခဲ့သလို ပြည်ပကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြတာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဟာ မြန်မာပြည်မှာ အနှစ် ၃ဝ အတွင်း ပထမဆုံး ပါတီစုံလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပြီး လွတ်လပ်စွာ မဲဆွယ်ခွင့် သိပ်မရှိပေမယ့် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခွင့် ရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ ၁၉၈၈ ဆန္ဒပြပွဲတွေအပြီး အာဏာသိမ်း စစ်အစိုးရ လုပ်ပေးတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်သလို ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာ လွှတ်တော်ခေါ်မပေးတဲ့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲကတိ ဖျက်တယ်ဆိုပြီး စစ်အစိုးရကို နိုင်ငံတကာက ပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ကြပါတယ်။ ဓာတ်ပုံ ပုံစာ ချေမှုန်းခံရတဲ့ ၁၉၈၈ ဆန္ဒပြပွ
Prescription notes ဆေးစာ အတိုကောကျမြား
ဆရာမင်ျဂလာပါ သောကျဆေးတှမှောပါတဲ့ 1bd တို့ 2tds တို့ရေးသားတဲ့ အဓိပ်ပါယျအပွညျ့စုံလေး ဘယျမှာ ဖတျရှုလို့ရပါသလဲခငျဗြာ။ ဆေးစာအတိုကောကျမြား a.c. ante cibum before meals အစာမစားမီ a.m. ante meridiem before noon မှနျးမတညျ့မီ ad lib. ad libitum use as much as one desires; freely ကွိုကျသလောကျသောကျ agit agita stir/shake လှုပျသောကျပါ b.d./b.i.d. bis in die twice daily တနေ့ ၂ ကွိမျ od/qd omne in die every day/once daily တနေ့ ၁ ကွိမျ p.c. post cibum after meals အစာစားပွီးသောကျပါ p.o. per os by mouth or orally ပါးစပျမှသောကျပါ PRN, prn pro re nata as needed လိုတဲ့အခါq quaque every နစေ့ဉျ q.1 h, q.1° quaque 1 hora every 1 hour တနာရီ တကွိမျ q.d.s. quater die sumendus four timesaday တနေ့ ၄ ကွိမျ q.h. quaque hora every hour နာရီတိုငျးမှာ q.h.s./h.s. quaque hora somni every night at bedtime ညတိုငျး မအိပျမီ q.i.d. quattuor in die four timesaday တနေ့ ၄ ကွိမျ s.o.s., si op. sit si opus sit if there isaneed လိုတဲ့အခါ stat statim immediately ခကျြခငျြးသောကျပါ t.d.s. ter die sumendum three timesaday တနေ့ ၃
PR at glance ပီအာ သို့မဟုတ် ရှုံးလဲနိုင်ရမယ်
ရေးထာတာက ၇-၄-၂၀၁၅ နေ့ကတည်းက။ အခုတခါ အလားအလာရှိလာပြန်ပြီ။ ၂၀၁၅ တုန်းက အဆို ရှုံးသွားသူတွေကို စစ်ကောင်စီမှာ နေရာပေးထားတယ်။ NLD တပါတီတည်းက အပြတ်နိုင်လည်း တပါတီတည်းကနေ အစိုးရဖွဲ့မရအောင် အသစ်တဖန် လုပ်လာနိုင်တယ်။ ဗခမက မအလ က သမတ လုပ်လို့ရအောင် အကြံသစ်ထုတ်တာဖြစ်တယ်။ လေ့လာရေးစာတခုအဖြစ် ထပ်မံတင်ပြပါတယ်။ ၁။ နိဒါန်း ၂။ ပီအာ စနစ်အမျိုးမျိုး ၃။ ပီအာ စနစ်ကို ကြိုက်သူတွေအပြောနဲ့ မကြိုက်သူတွေအပြော ၄။ ပီအာ နိုင်ငံရေးကွက် ၅။ ပီအာ နိုင်ငံရေးအလားအလာ ၆။ ပီအာ စနစ်သုံးနေတဲ့နိုင်ငံများစာရင်း ၇။ နိဂုံး ၁။ နိဒါန်း ကမ္ဘောဒီးယားမှာ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲရဲ့ အစပိုင်းလို့ သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ၂ဝဝ၃ မှာ ကျင်းပတော့ နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာသူများအဖွဲ့ ကာတာ ဖေါင်ဒေးရှင်း နဲ့အတူ လိုက်ပါခဲ့ရဘူးတယ်။ မဲပေးတဲ့ရက်မှာ မဲရုံတွေကို တခုပြီးတခုသွားကြည့်ပြီး၊ မဲရေတွက်တာလဲ လေ့လာစောင့်ကြည့်ကြတယ်။ နိုင်တဲ့သူကို ချက်ချင်းဆိုသလို သိရပေမဲ့ ပီအာ စနစ်ရှိနေလို့ မဲအများဆုံးရသူတိုင်းက အမတ်မဖြစ်သေးဘူး။ တွက်တာချက်တာတွေ လုပ်ရသေးတယ်။ ဟွန်ဆန် ဟာ အဲဒီအချိန်ကတည်းက ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်နေတာ အခုထိပါ။ သင့်ခယူး ပီအာ။ ပီအာ ဆိုတဲ့ Proportional Repr